एनआरएन अध्यक्षका उम्मेदवार डा. पौडेलको अवस्थामा राम्रो - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७१ चैत २४ गते १०:४८ मा प्रकाशित
अमेरिकी एनआरएनको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा अध्यक्ष पदका सशक्त उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको पक्षमा जनलहर उर्लिएको छ । पौडेल शिक्षित ,भद्र र इमानदार छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन l
अमेरिकाका गरिएको मत सर्वेक्षणले डा. पौडेललाई सबैभन्दा अगाडी देखाएको बुझिएको छ भने पौडेल दौडाहामा लागि रहेका छन् l
यसै साता पौडेलको न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा कार्यक्रमहरु हुने भएका छन् । निर्वाचन क्याम्पेनका विषयमा पौडेल भन्छन्– ‘साथीहरुले धेरै राज्यहरुको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिरहनुभएको छ । भ्याएसम्म सबैतिर गइराखेको छु । समय अभावले सबै कार्यक्रम भ्याउन गाह्रो परिरहेको अवस्था छ ।’ निर्वाचनकै प्रसंगमा पौडेल थप्छन्– ‘सकारात्मक सोच र सकारात्मक कामका लागि एनआरएनमा आएको हुँ । साथीहरु सबै जनाले माया गरिराख्नुभएको छ । विश्वास छ, मलाई अध्यक्षमा पु¥याउनुहुनेछ । त्यसपछि म सबैको मनको प्रतिनिधित्व गर्नेछु ।
कनेक्टिकट निवासी एवम् एनआरएन मतदाता श्रीराम भुजेलले भने– ‘म फेसबुकको पारखी हु“, डा. पौडेलको कुनै पनि स्टाटस र अन्य पक्षमा लाइक र कमेन्टको बढी हुन्छ ‘
प्रजातन्त्रको जननी मानिने अमेरिकामा अधिकांश नेपालीहरु पनि प्रजातान्त्रिक धारमा विश्वास राख्ने पृष्ठभूमिमा पौडेलको जित हुने विश्वास गरिएको छ l
न्यूयोर्कमा कार्यरत एक व्यवसायीले भने– ‘डा. पौडेलको शालीन व्यक्तित्व र उनको उच्च शिक्षाले धेरैको मन जितेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उनको उच्च व्यावसायिकता हो ।
नेपालमा पूर्व विद्यार्थी नेतासमेत रहेका डा. पौडेलको पक्षमा अधिकांश प्रजातन्त्रवादी, शिक्षित एवम सर्वसाधारणको समर्थन रहेको देखिएको छ । डा. पौडेलले नेपालमा निर्माणाधीन एनआरएन भवनको सहयोगार्थ इमानदारीपूर्वक ५ हजार डलर दिएर चन्दा न्यूयोर्कमा चन्दा अभियानको खाता खोलेका थिए l डा. पौडेलले खसेको मतको सर्बाधिक ल्याउने अधिकांशले आँकलन गरेका छन् ।